Kobcinta khudradda cagaaran: 5 categorias
Kobcinta kaadhka cagaaran (kaligeed) - 5 categorias
Kaadhka cagaarka ah ee kaarka cagaaran waa inaad ku qortaa khadka degaanka
Laga soo bilaabo qoraallada cagaarka ah oo ka mid ah diyaarka ah oo ku saabsan macaamiisha ah ee loo yaqaan 'Unidos', ka mid ah oo ku saabsan sheyga sirta ah ee lafilayo que la ciudadanía.
Cada año fiscal se tramitan khudbada jamac ah ka mid ah mid ka mid ah nuevas tarjetas de reidencias, también conocidas como kaarka cagaaran. Halkaas waa inaad ka heshaa sirta qaanuunka
La soco kaarka cagaaran ee kaarka cagaaran
Cualquier ciudadano estadounidense puede pale la si joogto ah lacag si aad u siguientes familiares: cónyuge, hijos, hermanos y padres .
Ugu dambeyntii waa inaad ku qortaa ciqaab aad uwanaagsan oo aad la socoto oo aad ka codsan karto badda 21 sano.
Wixii ka dambeeya, kaarka cagaarka ah , ka dib, si toos ah, si joogto ah u soo saari doonaa si aad u hesho 2 sano oo aad ka mid ah oo aad u baahantahay in aad ka mid noqoto.
Ugu dambeyn qashin-qubka, ka hor inta aan la helin qadar-yada iyo qadar-jebinta calaamadeynta calaamadeynta khadka taleefanka ee USCIS oo la xiriirta la-talin iyo la-talin ku meel gaar ah. Mientras oo ku taqasusay, el matrimonio ma kala saari karto furiinka.
Si kastaba ha ahaatee, waa in aad ku qorto EEUU, oo aad u baahan tahay inaad ku qorto.
Cunaqabataynta, si aad u soo hor mariso in la xiro Estados Unidos, la-taliyaha ka hor inta aan la duubin si ay u noqdaan mid aan loo baahnayn. Si aad u heshid sheygaaga si aad u soo saartid si aad u soo saartid si aad u kala qaybiso.
Asaasorarse sobre la qabsoome, si aad u aragto, si aad u dhejisid dhakhtarkaaga.
Dadka degan waxay joogteynayaan sharciyada joogtada ah si ay ula socdaan dhaqdhaqaaqyada. Wixii macluumaad ah oo ku saabsan macaamiisha, waxaad u baahan tahay inaad ka faa'iideysato ama aad ka faa'iideysato.
Tanto losyogusa como deg deg ah oo ka mid ah dadka degan degaanku waxay u baahan yihiin in la ogeysiiyo khibrad khaas ah oo loo yaqaan ' patrocinar'. Además, en determinados casos laga yiraahdo khatarta ka soo horjeeda khatarta ka timaaddo khatarta ah ee khatarta ah ee khatarta ah ee khatarta ah.
Wixii muhiim ah ee aad u baahan tahay si aad u martiqaado si aad u hubi in aad u baahan tahay . Qeybaha kala duwan ee ka mid ah kuwa ugu sareeya ee loo baahan yahay in ay ka mid noqdaan 21 sano oo ka mid ah kuwa ugu dhow ee ka mid ah 21 sano oo ka mid ah dadka ku nool yurub oo ka mid ah oo ah kuwa ka mid ah kuwa ugu dhow ee aad u baahan yihiin.
Permiso de kalkaalisada xasaasiyadeed
Laascaanood waxay ku xiran tahay kaarka cagaaran ee kaararka ceymiska, si aad u qadarin kartid looma baahna inaad ku qorto amar amarikaas ah amaba kuwa deggan deganayaasha sharciga joogtada ah. Estas wiilka lasugay 100 sano ka hor.
Laga soo bilaabo qalabkii ugu dambeeyay ee sonkorimka ah ee loo yaqaan ' H-1B ' ayaa loo baahan yahay in loo isticmaalo khidmadda loo yaqaan ' Tribunal' . Halkaan waxaad ka heli kartaa fiisooyin ku xiran tixgelin iyo ogeysiis .
Ka dib, ka hor inta aanad ka mid ah oo aad u baahan tahay, si aad u heshid, si aad u ogaatid in aad ka shaqeyneyso, si aad u hesho shaqaale, si aad u hesho shaqaale ah, si aad u hesho kaarka cagaaran . Pero la H-1B waa inaysan ku qancin jamacs automáticamente en una residencia.
Asimismo, la socoshada L-1, waa in aad u wareejisaan, adoo raacaya kharashka aad ka heli kartid.
Además de esos casos existen situaciones gaar ah oo ku saabsan khaas ah oo ku haboon in ay ka mid noqdaan. Por ejemplo, el caso de personas ad hoco ad hoco , ado sano, safaarada aduunka oo dhan waa in aad ka faa iideysata fiisada EB-1.
Lotería de visas de londonta de l'aatos
Cada año el gobierno de Estados Unidos oo ah 50,000 oo fiisayaal ah oo ka mid ah jimciyadaha ka midka ah oo ah "in diversity" ka mid ah oo ka mid ah si aad u hesho kaarka cagaaran oo aad ka heli kartaa, si aad u hesho hijrada ah 21 sano.
Waad ku qanacsan tahay in aad ka tirsantahay macaamiisha aad u baahantahay si aad u qadariso dijitalka dijitalka.
Ka hor intaadan ka qeyb galin ama ka qeyb galayaasha shirka waxaa ka mid ah EEUU. Calaamadaha ugu badan , waxaa ka mid ah: Dumarka Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Perú y República Dominicana.
Loogu talagalay qadar jimicsi ah oo aan la mid aheyn oo aan ku habooneyn in aad ku qorto adoo siiya khadka cagaaran ee EB-5 sano iyo kaarka cagaaran.
La qabsashadu waxa ay hoos u dhigeysaa muraayadaha aduunka oo dhan , si ay u noqdaan kuwo ku haboon oo ay u doortaan in ay ka mid noqdaan.
Maqnaanshaha iyo Horumarinta Caadiga ah ee loo yaqaan 'Unidos', si aad u sii darsato oo aad u baahan tahay si aad u noqoto mid aan loo baahneyn.
Ansaxinta dhaqaalaha era nisaria iyo khayraadka tooska ah, trabajando el inversor en el negocio. Ahora, qirashada dembiga, oo ku haboon iyo hoos .
Ma jiro wax khasaare ah oo khalkhal galin kara safaarada EB-5 oo ku xiran tahay inaadan ku dhejin kharashka adoo raacaya khidmadda E-2, waa inaad ka heshaa E-2, si aad u heshid e-1 / dhoofinta.
Ugu dambeyntiina waa in aad ku qorto, adoo ku dhejiya baaskiilada, adoo raacaya baaskiil waaskoo dhan iyo in aad u baahatid kaarka cagaarka ah ee EB-5. oo aan ku habooneyn in ay ka mid noqdaan oo aan ka mid ah waxqabadka dhabta ah .
Kaarka cagaaran ee kaar casriye ah
Lasanas que sufran Xadgudubyo badan oo ficil ah oo ficil ah oo aad u culus , oo ku saabsan mabaadii'dda, oo ay ku xiran tahay laaluush si aad uhogasho ah oo aad u baahan tahay in aad ka mid noqotaan si aad u ilaaliso iyo in aad ka ilaaliso. Al transcurrir tres años, si kasta oo aad u cadeeyeen si aad u ogaatid su'aasha ah in la ogaado oo ku saabsan fal dambiyeedka, si aad u hesho marxaladaha joogtada ah.
También existe la visa Taarbada la xiriirta ficilada iyo ficilada aad u baahantahay si aad u hubisid inaad u baahantahay .
Asimismo, Dhibaatooyinka Kala Duwan ee Dadka Dhalinyarada ah Ku Xanaansan - Dhibaatooyinka, Soomalidu waa inay ahaato mid aan ku habooneyn.
Xaaladaha gaarka ah
Halkaan waxaad ka heli kartaa kaarka cagaaran, adigoo kaashanaya kaar casri ah, ado ama asilo , sirta , diiwaanka, iwm.
Dib-u-heshiisiin aan loo baahnayn oo loo baahan yahay in loo ogolaado in loo ogolaado in loo ogolaado in loo ogolaado in la helo kharashka,
Wixii macluumaad ah oo ku saabsan sida ugu haboon ee loo baahan yahay, waxaad u baahan tahay inaad sii wadato . Pero no es fácil obtenerlo.
Cudurka dabiiciga ah waxaa laga helaa cagaarsho ka dibna cilad la saaro dhibaatooyinka, dhibaatada ka dibna waa la baarayaa - tijaabin la'aanteed si ay u noqoto mid isku mid ah oo ay ku haboon tahay in ay ka mid noqdaan.
Por último, si aad u asaasiga ah oo aad u soo saartey si aad u qulqulato oo aan lahayn berriga Estados Unidos, oo ah 20 sano oo ka mid ah barnaamijyada ka mid ah in ka badan oo ka mid ah calaamadaha soo noqnoqda . Lanbarka laydhka laysku qoro waa wax weyn.
Wixii macluumaad dheeraad ah. Looma baahna asesoría sharci.
12 waa lagama maarmaan si aad u heshid fiisadaada
Las 10 ciudades más sárt de l'de Estados Unidos para vivir
12 Kaalmo-dhaqaaleedka ugu dambeyn ee carruurta (kaalmo cunug)
Dónde waxaa laga yaabaa in ropa de marca barata en Nueva York (iibka Sample)
Citas waxay la socotaa USCIS dhexdhexaadin ah INFOPASS lacag bixinta macluumaadka muhaajiriinta
Perdón I-601 oo ah kaararka cagaarka ah
Pasos waa in aad ka baxdo oo la xiro oo ku saabsan safarro ku saabsan Estados Unidos
Fecha de horay u sii wado in ay sii waaraan
Waajibaadku waa in aan ahaado mid aan isbeddelin
Cómo oo la siinayo fiiso ku salaysan bini'aadanimada lacagta shaqsiyadeed
Jane Jacobs: Dhaqtarka Cusub ee Isbedelay Qorshaha Magaalada
Qeexidda Oomidinta iyo Tusaalaha ku jira Kimistaanka
Dadka ajaanibta ah ee sharci darrada ah ma bixiyaan canshuuraha?
Jacaylka Dunnaanta ee Dinosaur
Tilmaamo badan oo Dareen ah ee Xisaabta Waxbarashada Gaarka ah
Maxay kala duwan yihiin inta u dhaxeysa beps, yellowjackets, iyo hareeraha?
Buddhism ee Japan: Taariikh Kooban
Duqa iyo Dareenka Rushka - Waa Maxay?
Muxuu yahay qaabka waxbarashadaada?
Dagaalka Faransiiska iyo Dagaalka: Marquis de Montcalm
Aqoonsiga Jaamacadda Gallaudet
Daawada Nabiga: Dhaqanka Islaamka Caafimaadka
James Garfield: Xaqiiqooyin muhiim ah iyo Qoraal kooban
Maxaad u Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Barnaamijyada Barnaamijka Toddobaadka ee Toddobaadka
BC (ama BC) - Tirinta iyo Tirinta Taariikhda hore ee Roomaanka
Qeexitaanka Sharciga Dalton
8 Rabshadaha Roobka Ruufka ah ee ka yar $ 150
Xisbigii Ogolaansho-Lama Qaadey Socdaalka Mareykanka
10 Fudud qarsoodi ah oo qosol leh oo kugu soo kicin doona
Master Damiinka Buuxinta ee Bixiyahaaga
Xaqiiqooyinka ku saabsan Las Vegas, Nevada
Qormo Xoghayaha Guud ee Senetka Maraykanka Rand Paul
Abaaraha 6 Rock Music Music ee Dunida
Sida Loo Xakameyn Lahaa Faafaahinta Faransiiska Faransiiska 'Soutenir' ('Taageero')